डङ्कन गाउन असमर्थ छ र यूरोभाइज गाउ प्रतियोगिता प्रतियोगिता (एलजीजीआईटीपी प्रचार) मार्फत आएको छ: मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	20 मई 2019 मा	• 10 टिप्पणिहरु
माफ गर्नुहोस्, तर म वास्तवमा डंकनलाई क्यारेक्टरको लाभको वरिपरि हिype बुझ्न सक्दैन। मैले भर्खरै गीत थप्नको लागि यस डंकनको बारेमा के धेरै धेरै राम्रो देख्नुभयो। त्यसपछि मिडियाले अझै केटाकेटीलाई प्रचार गर्न सक्छ, तर मेरो विचार भनेको हो कि उनी सबैले गाउन सक्दैनन्। यो एक साटो चकलेट र crackling छ। कुनै प्रतिभा छैन। यो गीत गाई गर्न केहि छैन। यसबाहेक, उनले पहिले नै थाहा पाएको थियो कि त्यो जित्न जाउँथ्यो, किनकी उसले पहिले नै मुस्कुराएको थियो र लगभग माथि उठ्यो जब उनको नाम पनि उल्लेख थिएन (हेर्नुहोस यहाँ)। के तपाई मेरो विचार जान्नुहुन्छ? यो अब औपचारिक रूपमा सम्भव छ, किनभने यो दाबी गरिएको छ कि हामी अझै पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। तपाईं सिर्फ राजनीतिक रूपमा सही हुनु पर्छ, त्यसैले तपाईं भन्न सक्नुहुन्न कि यूरोभाइज गाउ प्रतियोगिता प्रतियोगिताले मात्र एलजीबीआईटी सहभागीहरू समावेश गर्दछ। म त्यो पनि गर्नेछु। र त्यस संक्षिप्त नाममा एच सीधाको लागि खडा छैन।
यूरोभाइज गन्तव्य प्रतियोगिता शुद्ध प्रचार हो, त्यसमा आधारित प्रोग्रामिंग तपाईंको रिटार्नमा LGBTI को बासिन्दा। पहिले नै 2014 मा ट्रागगेंडर कन्चेता वर्स्ट को विजय संग यो स्पष्ट भयो कि सम्पूर्ण त्योहार लुसिफेरियन विचारहरुलाई बढावा दिन को लागि एक ठूलो प्रचार शो हो। यो ट्रांसगेंडर विचार को लुसिफरियन एजेन्डा लाई बढावा दिन को बारे मा छ, ले LGBTI लाई नयाँ मानक (आदर्श) लाई बढावा दि्छ। सयौं दर्शकहरूको आँखा यो नयाँ मानकमा प्रयोग गरिन्छ। नयाँ व्यक्ति समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रागगेंडर वा इन्टरसेक्सुअल हो (जुन जुन जुन हुन सक्दछ)। तथापि, यो समूहलाई थाहा छैन कि उनीहरूलाई धेरै ठूलो एजेन्डाको लागि प्रयोग गरिँदैछ, अर्थात् मानिसलाई ट्राफेनमैन सेक्सलेस साइबोर्गको दिशामा सम्पूर्ण परिवर्तनको रूपमा।
हो, त्यो मेरो विचार हो। तपाईले राजनीतिक रूपमा सही भेट्टाउन सक्नुहुन्न, तर तपाईले अनौठो रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाइँ टेलिभिजन र मिडिया पछ्याइरहनुभएको छ र तिनीहरूले तपाइँलाई एलजीआईटीआईटी विचारधाराको महत्त्वपूर्ण सबै कुरामा आक्रमण गर्न प्रोग्राम गरेका छन्। फेसबुक, ट्विटर र अन्य सोशल मिडियामा, तपाईंले सोशल मिडिया स्टेट-रोल सेना द्वारा आक्रमण गरिरहनुभएको छ र नयाँ मानक गम्भीर गर्न तपाईं धीरे-धीरे सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ।
लुसिफरियन विश्व धर्म जुन क्याथोलिक चर्चले पछ्याएको छ (र जसलाई पनि विश्व सरकारको विश्व धर्म हुनेछ), जहाँ मानिसले आफैलाई पुनरुत्थान गर्न सक्दैन। यही कारणले गर्दा सबै यौन प्राथमिकताहरू जुन पुरानो जैविक स्तर (सजिलै विषमहीन) बाट अलग रहन्छन्, एलजीबीआईटीपी प्रवद्र्धनमा पदोन्नति गरिन्छ कि हामी हाम्रो वरपर हरेक ठाउँमा चिन्न सक्छौं। लुसिफरियन प्रतीक Baphomet (दुई-पैराग्रेको बकरी) हो। लुसिफेरियनवाद वास्तवमा हेरोफेरोडाइट वरपर घुमाउँछ। 2014 मा यूरोवेजिजन (युरोपको लागि दृष्टि) गीत उत्सव जीता कोन्टिता वुरस्ट, यो अस्पष्टताको राम्रो प्रस्तुति थियो। मानिसलाई तीव्र उत्तराधिकारमा बदलिनु पर्छ र सबै यौन प्राथमिकताहरू प्रवर्द्धन गरिनु पर्छ, विषैले बेरोजगार। प्राथमिक विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई भनिएको छ कि तपाईंको लिङ्ग एक छनौट हो र त्यसोभए युवती छिट्टै ब्रेकविश हुन्छ। तर आमाबुबाले आफ्ना छोराछोरीसँग अनभिज्ञ रूपमा प्रचार प्रचार देखेर आज्ञाकारी रूपमा भाग लिन्छन्।
अनि अर्को पीढी यो नयाँ मानकको आदी भएको बेला, अर्को कदम मात्र अर्को परिवर्तनको लागि एक सानो कदम हो, अर्थात् जसमा मानव शरीर धीरे-धीरे त्रासदी को दिशा मा बदलिन्छ। यो बिस्तारै पनि हुनेछ, जसको कारण हामी पहिला केहि सजिलो उपकरणहरू र हाम्रा शरीरहरूमा थपिनेछौं। यद्यपि, मस्तिष्क-क्लाउड इन्टरफेस प्रविधि हामीले पहिले नै सोचेको भन्दा नजिक छ र हामी पहिले नै अन्तिम लक्ष्यको लागी एक चरण हो। जसमा मानवता लैजानहीन डिजिटल दासहरूमा परिणत भएको छ। त्यस समय सम्म तपाई पहिले नै यति दिमागी हुन सक्नुहुनेछ कि तपाईले पनि यस तरिकाको लेखलाई तपाइँको मस्तिष्क-क्लाउड इन्टरफेस मार्फत पार गर्न अनुमति दिनुहुने छैन।
"तर कल डंकनले जेरोन पउउबाट2प्लैटिनम रेकर्डहरू प्राप्त गरे र धेरै मानिसहरूले उनको लागि मतदान गरे। सबैले सोचेका छन् कि यो राम्रो छ "... हो यो हो कि मिडिया तपाईले दिनुभएको छ। मिडिया प्रचार हो। केहि पनि के देखिन्छ जस्तो लाग्दैन।
डेभिना मिशेलले यूरोविजन साङ् प्रतियोगिता प्रतियोगितामा अर्को ट्रान्सगेंडर गर्ने? डन्कन लरेन्सले उम्मेदवारी देखाउँछन्!
ट्याग: 2019, एजेन्डा, Conchita, छेउमा, डंकन, Eurovision, विशेष, समलैंगिक, वर्ष, कार्ड, LHBTI, लुसिफरियन, नेदरल्याण्ड, प्रचार, गीत उत्सव, अर्को, विजेता, Wurst
20 मई 2019 मा 08: 54
100% पकाइएको कार्ड, यो यति धेरै मोटो छ कि मलाई आश्चर्य छ कि यो अवतरण गर्ने इरादा छैन।
ती सबै पिरामिड र पृष्ठभूमिमा रहेको ऊ बढ्दो छोरा / सूर्य रेकर्ड गरिएको छैन र न त भिडियो क्लिप हो।
लविंग लुसिफर एक खुसी खेल हो, मलाई एक खुसी खेल को आदी छ।
यस खेलमा आफैलाई हराउनु, यस अंडरवर्ल्डमा सबै अजीब छाडको आदी।
20 मई 2019 मा 08: 59
म गीत उत्सव पछ्याउँदैन, तर एक चोटीमा एक पटक जब तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ जब तपाइँ टिभी हेर्नुहुन्छ जो कोहीलाई भेट्नुहुन्छ। मैले सोचेँ कि यो अजीब थियो कि यो उल्लेख हुनु पर्छ कि श्री बिसेक्सुअल। त्यस्ता त्यस्ता उत्सवको लागि गानासँग के गर्नु पर्छ? वास्तवमा केहि पनि छैन, तर बेशक प्रचारको साथ मैले मेरो मित्रलाई भने। यो स्पष्ट छ र तपाईं लामो समयसम्म यसको बारेमा सुन्नुहुनेछ, किनभने यसले उनीहरूलाई यति भावनात्मक बनाउँछ, ओह आँखामा आँसुले कस्तो सुन्दर छ।
20 मई 2019 मा 09: 25
अब एक चौथो गतिमा विस्तार भएको एक धेरै ढिलो-रोलिंग एजेन्डा, मानव अधिकार समानता ब्ललाको अनुहारमा, कुन स्मार्ट चालक, संयुक्त राष्ट्रसंघको विचार टैंक फलफूल हुन्छ
20 मई 2019 मा 09: 30
हो, यो शब्द "समानता" को शब्द ईयू एजेन्डामा पनि छ
हामी सबै बराबर छौं, तर सबै बराबर छैन।
एक मानिस मानिस हो; एक महिला एक महिला हो। भन्दा पहिले ...
हामी आत्मा स्तरमा बराबर छौं, तर त्यसै होइन।
ओरेवेलियन भाषण बलात्कार मानवता को दिमाग मा महान उचाइहरु लाई गरिन्छ। समान, तर बराबर छैन। म एक पीई र टेस्टोस्टेरोन छ। एक महिलाले छाती, गर्भ र महिला हार्मोनहरू छन्: होइन। समान
20 मई 2019 मा 20: 48
डन कर सकते हो = नग्न (नहीं कर सकते) गायन गर्न सक्छन् (लुसिफरियन एलेस्टर केकली "तपाईं को नजिकै" सबै केहि बारी को बारी)
डिजिटल घेरा (धक्का) प्राप्त गरेको छ
म्याडोना प्रदर्शनको विफलता यो भ्रम सिर्जना गर्न थियो कि vocal real-time पिच प्रविधि अवस्थित छैन ... तिनीहरू अवस्थित छन्।
20 मई 2019 मा 21: 15
मैडोना कनाउद पनि गाइन्छिन् (उनीहरु कहिल्यै पक्कै भएन ... सधैं पिच प्रविधि)
20 मई 2019 मा 21: 24
लुसिफरियन (एलेस्टर Crowley) समुदायले सबै चीजको वरिपरि घुमाउदछ (Dun-can = nud फोनेटिक 'होइन') ओह हो कि 933×6= 666 को लागि खडा हुन्छ (यदि तपाईं9घुमाउनुहोस् - सबै कुरा वरपर घुमाउनुहोस् - तर तर एक तरफ)
20 मई 2019 मा 22: 17
डन्कन लरेन्स 'अनावश्यक अशुद्ध' को लागी एक अङ्गग्राम छ
जसको मतलब धेरै नै छ: 'अनावश्यक अशुद्ध'
तर हाँस, हामी हामी सबैको वरिपरि घुम्न चाहँदैनौं, किनकि एलेस्टर क्रोले आफ्नो कब्रमा घुमाउन सक्छ र कोही पनि चाहँदैनन् कि होइन
21 मई 2019 मा 18: 08
राम्रो छ या राम्रो छैन ... यी प्रकारका गीतहरू सामान्यतया यस उत्सवमा जित्न सक्दैनन्। राम्रो। राजनीति, तर हामीले त्यो वर्षको लागि जान्थ्यौं। तर यदि तपाईं जित्नुभयो भने बेशक तपाईले यसलाई कल गर्नुहुन्न।
Iffy त्यो महोत्सवको स्थान, यदि सुरक्षा एक शर्त हो। तर सम्भवतः हामास इजरायल (वयोर्कियन दिन) हो र त्यसपछि यो सम्भव छ।
अर्को पटक NL मा ... मिडियाको लागि भरपूर ... यो सबै बारेमा सामग्री हो।
21 मई 2019 मा 20: 22
2 बाट: 41 तपाईं पनि एक शैतान मुस्कुराउने अनुहार देख्नुहुन्छ। शोको रोशनी (पिरामिडहरू यस अनुहारको रूपमा बनाउँदछ)
« अन्तिम सत्य अवस्थित छैन?
यूरोपीय चुनाव र FvD सुरक्षा नेट ('आप्रवासनहरूको उदाहरणद्वारा रिलिज) »
कुल भ्रमण: 13.018.580